काँग्रेस महाधिवेशनः जिल्ला सभापतिमा रमेश भण्डारीकाे उम्मेदवारी किन ? | Khash Khabar
गृह काँग्रेस महाधिवेशनः जिल्ला सभापतिमा रमेश भण्डारीकाे उम्मेदवारी किन ?
काँग्रेस महाधिवेशनः जिल्ला सभापतिमा रमेश भण्डारीकाे उम्मेदवारी किन ?
२३ असार २०७८, बुधबार ०५:५५
असार २३, बझाङ। नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा नेता रमेश भण्डारीले बझाङ जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारी दिने भएका छन्।
महाधिवेशन तालिका अनुसार एकमात्र संघिय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा साउन २३ गते हुने जिल्ला महाअधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। हाल उनी नेपाली काँग्रेसको संघिय प्रदेश सम्वन्य विभागको केद्रीय सदस्य रहेका छन्।
काँग्रेसको १२ र १३औँ महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य रहेका भण्डारी १२ औँ महाधिवेशनमा जिल्ला सचिवमा निर्वाचित भएका थिए। उनले २०४२ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्द भएर राजनीति सुरू गरेका थिए।
उनले विद्यार्थी कालदेखिनै आफू काँग्रेसको राजनीतिमा सकृय रहेको भन्दै सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताए । भण्डारीको सभापतिमा उम्मेदवारी किन रु सभापतिका उम्मेदवार २०४२ साल देखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा लागेर अनवरतरूपमा हालसम्म सकृय रहेका छन्।
भण्डारी नेपाली काँग्रेसको आह्वानमा २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा शसक्त रूपमा लागेका थिए। सो आन्दोलनमा उनलाई काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा यातना समेत दिइएको थियो। त्यस्तै २०४७ सालमा नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बझाङबाट सहभागी भएका थिए ।
४८ सालको आम चुनावमा पनि स्थानीय,क्षेत्र र जिल्लामा उनको सकृय भूमिका रहेको थियो। भण्डारी ४९ सालमा बझाङ जिल्ला विकास समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने,५२र५३ साल र ६२र६३ को जनआन्दोलनमा सकृय भएर लागेका थिए। उक्त आन्दोलनमा भण्डारी घाइते भएपछि तीन महिना अस्पतालमा बस्नु परेको थियो।
त्सपछिका ६४ सालको निर्वाचन ७० र ७४ सालमा पनि पार्टीको सिपाहीका हिसाबले आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । उक्त महाधिवेशनको जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारमा अफूलाई सहयोग गरेर अत्याधिक मतले बिजय गराउन भण्डारीले सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन यहि असार २० गतेदेखि सुरू भएको छ। २० गते कृयाशिल सदस्यता सभापतिलाई बुझाउने, असार ३० गते सभापतिले सहिगरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाउने कार्यतालिका रहेको छ। यस्तै आगामि साउन १२ गते वडा समितिको अधिवेशन,१६ गते गाउँ रनगर अधिवेशन हुने भएको छ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन साउन २० गते,एकमात्र संघिय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २३ र एक भन्दा बढी संघिय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २६ गते अधिवेशन सम्पन्न हुने भएको छ । भदौ १ र २ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र १६-१९ गते सम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने काँग्रेसले कार्यतालिका बनाएको छ।